Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwuri Copyright muLinux | Linux Addicts
Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwuri Copyright paLinux
Paunowana rwiyo, kana chero imwe ruzha, pamapuratifomu ekutepfenyura seYouTube, Twitch, nezvimwe, zvinogara zvichinakidza. ziva kana iyo odhiyo yakadzivirirwa nekodzero kana copyright kana kana iri munharaunda yeruzhinji uye unogona kuishandisa wakasununguka. Izvi zvakatonyanya kukosha kana iwe ukazvipira kurodha mavhidhiyo kumapuratifomu aya uye usingade kuti abviswe nekutyora kodzero dzako.
Kuti ugone kuita izvi, zviri nyore kwazvo kana iwe uchitevera matanho mune izvi Tutorial. Pamusoro pezvo, iwe unozoziva zvakare mhando dzekodzero dzinogona kuve nerwiyo uye izvo chimwe nechimwe chazvo chaizokubvumidza iwe kuita ...
1 Mhando dzekodzero dzinobata nziyo: hazvisi zvese zviri Copyright
2 Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwuri Copyright
2.1 Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwune copyrighted paYouTube
2.2 Uye unozviita sei paTwitch?
2.3 Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwune copyrighted pa Instagram
2.4 Iyo Spotify Copyright system inoshanda sei
3 Zvishandiso zvekutora odhiyo pasina copyright
Mhando dzekodzero dzinobata nziyo: hazvisi zvese zviri Copyright
Paunenge uchitaura nezvezvakagadzirwa nemunyori kana vanyori, izvi zvinogona kuburitswa nenzira dzakawanda. The munyori anogona kusarudza:
Duty mahara: Inziyo kana manzwi asina kodzero, saka chero munhu anogona kuashandisa pane chero chaanoda, pasina kubhadhara mitero, kana kutyora chero mutemo. Ivo vanowanzo zivikanwa kwazvo pawebhusaiti uko kune magaraji ane zviwanikwa zverudzi urwu zvakagadzirirwa kuti chero munhu azvishandise mumharidzo yavo, mavhidhiyo, nezvimwe. Izvi zvinosanganisira kuzvishambadza pasi pemahara domain zvakare, uye kunyange kuita mari nazvo pasina zvirambidzo uye zviri pamutemo. Ehezve, kusununguka kwekodzero hakusi nguva dzose kwakafanana nemahara, chimwe chinhu chakafanana chinoitika kune yemahara kana yakavhurika sosi software, chinhu chimwe ndechekuti iwe unokwanisa kuwana kodhi yayo uye imwe yakasiyana zvakanyanya iyo mugadziri haakwanise kubhadharisa basa ravo ...
Public domain: inogona kuvhiringa, uye pamwe yakafanana neiri pamusoro. Zvakadaro, mabasa aya ndeaya aive nekodzero panguva iyoyo, asi kuti munyori haasati avandudza kodzero yebasa rake kana kuti akafa kare uye apera. MuSpain, iyo Intellectual Property Law inosimbisa kuti kodzero dzebasa dzinopera makore makumi manomwe mushure mekufa kwemunyori. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mimhanzi yakava nzvimbo yeruzhinji, saka chero munhu aigona kuishandisa akasununguka. Nekudaro, chenjera nekuti panogona kuve neshanduro dzemabasa aya akagadzirwa mushure mekutanga uye anozochengetedzwa. Izvi zvinodaro nekuti mumhanzi mune kodzero yekuumbwa kwemimhanzi kana mazwi erwiyo, uye kune zvakare kodzero yekurekodha ruzha ...
Creative Commons Songs: vari CC marezinesi vanogona kugadziridzwa nemunyori, vachibvumira vamwe kuti vashandise neimwe nzira. Ndiko kuti, vanogona kushandiswa mahara, asi nemamwe mamiriro. Kuti uone kuti aya mamiriro ndeapi, unogona kutarisa girafu rinowanzo kuperekedza aya mabasa uye nemavara makodhi:
BY: kucherechedzwa, inobvumira chero mhando yekushandiswa kwebasa, kunyangwe kutengeserana, kugadzira mabasa ekubva, kugovera, nezvimwe. Mamiriro ega ekuti mashandisirwo aya ave pamutemo kutaura nemunyori wemabviro.
BY-NC- Isiri-yekutengesa, yakafanana neiri pamusoro, asi haibvumiri kushandiswa kana kugadzira inobuda mabasa ezvinangwa zvekutengesa. Semuenzaniso, unogona kuishandisa muvhidhiyo isina purofiti, kureva kuti, isina kuita mari uye kutora mashoko emunyori mumakiredhiti.
BY-NC-SA: iyi imwe inosuma imwe pfungwa, yakafanana neyekare, asi inorambidza zvakanyanya. Mune mamwe mazwi, mune iyi kesi, mabasa anotorwa anofanira zvakare kupihwa rezinesi pasi pemamiriro akafanana nebasa rekutanga. Izvi zvingave zvakafanana nezvinoitika neGPL software rezenisi uye rezinesi reBSD, kureva kuti, inorambidza vs.
BY-NC-ND: munyaya iyi kunyorwa kwebasa kunofanira kubvumwa (BY), haibvumiri kushandiswa kwekutengeserana (NC) uye zvakare haibvumirwi kugadzira zvinyorwa zvinobva (ND).
BY-SA: Sezvauri kuona, inyaya yekubatanidza mavambo. Muchiitiko ichi, munyori anofanira kudomwa uye anofanira kugovaniswa zvakaenzana kana basa rinobva pariri rakaitwa.
BY-ND: Iri rezenisi rinobvumira kushandiswa kwekutengeserana kwebasa chero bedzi munyori wepakutanga achibvumwa, asi inodzivirira kushandurwa kana kubva pakugadzirwa.
Copyright: kana rwiyo rwakachengetedzwa ne ©, Ndiye munyori ane kodzero dzose dzakachengetedzwa. Ndiye ega anogona kushandisa basa racho, kunyangwe paine zvibvumirano zvekupa mamwe marezinesi kuburikidza nekubhadhara zvikwereti kana zvikwereti. Vamwe havazokwanise kuishandisa kune isiri-yekutengesa basa, kunyangwe yemavhidhiyo epamba, uye zvishoma kuita mari. Kunze kwekunge iwe uine kodzero dzakapihwa nemunyori, semuenzaniso, kana iwe wakabhadhara kuita shanduro, kana iwe uchibhadhara kuti ugone kuiparadzira mune imwe svikiro (redhiyo, TV, Internet), nezvimwe. Uye yeuka, chokwadi chekubhadharira rwiyo kana albhamu hazviite iwe mubati wekodzero, unogona kungoteerera iwe pachako uye hapana chimwe chinhu. Zvimwe zvinhu zvese zvinonzi piracy (kuita makopi, kuagovera, nezvimwewo). Kunyangwe iwe ukaridza nziyo kubva kuSpotify Premium yako, kubva kuYouTube, kana kubva kuCD yawakatenga, munzvimbo dzebhizinesi rako kana mumotokari yaunotakura vafambi. Izvo zvinotambudzwa zvakare ...
Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwuri Copyright
Kana rwiyo rwacho rwakwidzwa papuratifomu yakakurumbira yekutepfenyura, senge YouTube, nezvimwe, kune nzira dziri nyore dzekuita ungaziva sei kana rwiyo rwune copyrighted. Izvo zvinodzivirira matambudziko kana uchiishandisa, kana kubviswa kwevhidhiyo, uye kunyange kupara mhosva.
Kazhinji, kana isiri rwiyo rwekare, uye iri rwiyo rwemazuva ano nemuimbi anozivikanwa, saka. 100% ichava nekodzero, saka haugone kuishandisa chero zvakadaro. Dambudziko rinouya nemanzwi evanyori vasingazivikanwe kana nziyo dzisina kufarirwa zvakanyanya uko zvisingazivikanwe kuti dzine kodzero dzekodzero here kana kuti dziri pasi perimwe rezinesi. Kune izvo zviitiko, tevera anotevera tutorials:
Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwune copyrighted paYouTube
Kana iwe uchida kutarisa kana vhidhiyo kana rwiyo ine copyrighted kana kweteYouTube ine nzira yekuziva, kunyanya mushure mekupinda musimba reEuropean Copyright Law uye iyo North America DMCA. Iyi puratifomu ikozvino ine simba rekubvisa chero zvisiri pamutemo pasina chiziviso chekutanga, uye pasina kupindira kwemunyori, kunyangwe ichibvumawo zvirevo.
YouTube inozivisa zvidimbu zveodhiyo zvine kodzero muvhidhiyo yepuratifomu uye wozviratidzira mukati YouTube Studio. Kuti uite izvi, tevera nhanho idzi:
Pinda Youtube Studio.
Mumenu iri kuruboshwe tinya Content.
Wozoti paKurodha tab, tsvaga Zvinorambidzwa.
Iwe unogona kuona ipapo kana iine chero rudzi rwekurambidzwa.
Kutenderera pamusoro pezvirambidzo zvakanyorwa zvinokupa rumwe ruzivo rwezvazvinoreva.
Iwe unogona zvakare kushandisa mawebhusaiti senge eproves.com kwaunopinda zita renziyo uye wotarisa kana ine kodzero kana kwete. Zviri nyore...
Uye unozviita sei paTwitch?
Kana uri paTwitch, zvingangoita kuti uchasanganawo nenziyo dzine copyrighted. Kushanda uye mitemo yekudzivirira kodzero dzakafanana nedzeYouTube. Pane mutsauko mumwe chete, uye ndewekuti chero munhu akaisa zvakadzivirirwa pasina mvumo yemunyori, anogona kugashira katatu. Pakuramwa kwechitatu kana chiziviso, account yemushandisi ataurwa inobviswa.
Muchiitiko ichi, nziyo chete pasi Soundtrack neTwitch izvo zvawawana munzvimbo yeruzhinji, ine CC inobvumidza iwe kuzvishandisa, kana hapana copyright iwe unogona kushandisa.
Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwune copyrighted pa Instagram
Pasocial media like Instagram Nziyo dzakawanda dzinoiswawo kune nyaya kuti dzishandise semashure mumavhidhiyo. Ehe, chikuva ichi chinorambidzawo kushandiswa kwenziyo dzine kodzero. Kana ukashandisa rwiyo rune kodzero, uchaziviswa. Uye kana ukasaidzima mushure meyambiro, inozodzimwa otomatiki, vhidhiyo inonyarara, kana kuvharwa.
Unogona kushandisa chete free songs kodzero kana pasi peCC marezinesi ...
Iyo Spotify Copyright system inoshanda sei
La Swedish mimhanzi yekufambisa chikuva, Spotify, inewo hurongwa hwayo hwekuchengetedza kodzero dzekodzero. Zvinokutendera kuti uise nziyo pachikuva, asi haugone kutyora mutemo wayo. Kubhadhara kunyoreswa kwePrimum kwepuratifomu hakukupe kodzero yekushandisa nziyo dzadzo sezvaunoda, kungodziburitsa kuti uzvishandise wega.
Zvishandiso zvekutora odhiyo pasina copyright
Kuti ugone kushanda wakadzikama kuti nziyo hadzina copyright uye iwe unogona kuzvishandisa kubasa rako pasina dambudziko, iwe zvakare une akati wandei zviwanikwa, senge catalogs kana. maraibhurari emimhanzi asina madzimambo. Aya mabhangi ane nhamba huru yenziyo uye kurira kwaunogona kudhawunirodha nekushandisa:
Mahara Music Archive
Ehe, gara uchitarisa mhando yerezinesi yaunayo, sezvo sezvandambotaura, kana iri CC, havasi vese vanotendera iyo. Kushandisa kwekutengesa...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Nzira yekuziva sei kana rwiyo rwuri Copyright paLinux
Minecraft: Mapako uye Cliffs Chikamu II Chinouya kuLinux